thinzar's blog: Broga Hill (茅台山) Hiking
Labels: outdoor activities, places in Malaysia
Broga Hill (茅台山) Hiking
ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ တောင်တက်ပါ ဆိုသလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဟိုးတစ်ခေါက် Bukit Tabur Hiking သွားတာလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉။ Broga Hill တက်ဖြစ်တာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀။ (လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်တိတိက တောင်တက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံပါ။ အခုမှ ပုံတွေပြန်ကြည့်ရင်း မရေးရသေးတာ သတိရလို့။) ၂၀၁၁ မှာ တော့ တောင်မတက်ဖြစ်တော့ ၂၀၁၀က တောင်တက်တဲ့အကြောင်းရေးတာပေါ့။ Broga Hill ဆိုတာ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့နဲ့ မနီးမဝေး (နည်းနည်းတော့ဝေး)၊ ဆလန်ဂေါပြည်နယ် နဲ့ နီဂရီ ဆန်ဘီလန်း ပြည်နယ်ရဲ့ နယ်စပ်၊ နော်တင်ဟမ် တက္ကသိုလ် နှင့် Broga Town ကြားမှာ ရှိတဲ့ တောင်လေးပေါ့ကွယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က ပုံတွေကြည့်ရင်း တောင်တက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ သူငယ်ချင်း ၁၀ယောက်လောက်စုပြီး သွားဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။
အမြင့်ဆုံး peak က ၄၀၀ မီတာ (၁၃၁၂ ပေ)
စထွက်တဲ့နေရာကနေ အမြင့်ဆုံး တောင်ထိပ်ကို ၁.၇ ကီလိုမီတာ (၁ မိုင်နီးနီး) ဆိုတော့ သိပ်မဝေးဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။ ၁မိုင်ဆိုတဲ့ခရီးက မြေပြန့်မှာလျှောက်ရင်တော့ ၁၅မိနစ်လောက်ဘဲ ကြာပေမယ့် တောင်တက်တာဆိုတော့ နာရီဝက်နဲ့တစ်နာရီကြားကြာတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စောင့်နေတာနဲ့ ပိုကြာပြန်ရော။ :D
နေရာ တော်တော်များများမှာ ဒီလို လှေကားထစ်လေးတွေ လုပ်ထားပေးတော့ တက်ရတာ အရမ်းကို လွယ်သွားတယ်။
From first peak
အမှန်က နေထွက်တာ သွားကြည့်ကြတာဘဲ။ ထွက်တာ နည်းနည်းနောက်ကျနေတာနဲ့ နေထွက်မှ တောင်ခြေရောက်တယ်။ တောင်တက်ရင် ညဘက်အိပ်ရေးဝဖို့လိုတယ်။ အဲနေ့က သွားတာသွားကြတာ။ ညဘက် မအိပ်ထားတဲ့သူနဲ့ ၂နာရီ ၃နာရီလောက်ဘဲ အိပ်ထားတဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ တောင်နိမ့်နိမ့်လေးကို မနည်းတက်ရသလို ဖြစ်သွားတယ်။ သဉ္ဇာတို့ စတက်တော့ နေထွက်ပြီဆိုတော့ သူများတွေတောင် ပြန်ဆင်းလာကြပြီ။ ကလေးတွေရော ခွေးတွေရော အဖိုးအဖွားတွေရော အရွယ်စုံ ဆိုဒ်စုံ တောင်လာတက်ကြတာ။ ကလေးငယ်ငယ်ပိစိလေးတွေ ကျောပိုးပြီးတက်တဲ့ အမေတွေတောင် ပါတယ်။ တောင်တက်လမ်းက မကြမ်းပေမယ့် လူတွေနဲ့ တိုက်မိပြီး ချော်ကျမှာဘဲ စိုးရိမ်နေရတယ်။
Fourth peak @ 400 meters
Third peak ရောက်တဲ့အခါမှာ အားလုံး လက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။ ဆက်တက်ဖို့ အားမရှိတော့ဘူး။ အဖွဲ့ထဲက slipper စီးလာကြတဲ့ အစ်မကြီး သုံးယောက်ဘဲ ကြိုးကြိုးစားစား အဆုံးထိရောက်အောင် တက်ကြတယ်။ အပေါ်နားမှာ တောင်တက်လမ်း မရှိတော့ဘဲ ကြိုးနဲ့ တက်ရတယ် ပြောတယ်။ နေမြင့်လာတော့လည်း ကြာကြာမနေနိုင်ဘူး။ ပြန်ဆင်းခဲ့ရတာပေါ့။
ဒီမြက်ပင်တွေကြောင့် Broga Hill စိမ်းလန်စိုပြေနေတာ။ မြက်ပင်တွေ ရှည်လာရင်တော့ အကောင်ပေါတယ်လို့ပြောတယ်။ သဉ္ဇာတို့ သွားတုန်းက အပင်တွေ မီးရှို့ထားတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတော့ အကောင်ကိုက် မခံရပေမယ့် ဓါတ်ပုံလှတပတလေးတွေတော့ မရခဲ့ဘူး။ တောင်ကတုံးတွေအကုန် အစိမ်းရောင် ဖြစ်ရမယ့်အစား ဝါခြောက်ခြောက်တွေ ဖြစ်ကုန်လို့။
တစ်ယောက်မှ မရောက်ဖူးကြပေမယ့် Google map နှင့် GPS တို့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် တောင်ခြေကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ဘဲ ရောက်သွားတယ်။ (ဒါတောင် နည်းနည်ကျော်သွားသေးတယ်။) blog တစ်ချို့ ဖတ်သွားတော့ တက်ရတာ သိပ်မခက်မှန်း ကြိုသိထား သူများတွေ ပြောထားတဲ့အတိုင်း rabbit farm နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် oil palm estate (ဆီအုန်းခြံ) ကနေ စတက်တာ။ အဆင်းမှာ ကားရပ်ခ ၂ကျပ်ပေးပြီး မောမောပန်းပန်းနဲ့ KL ကို ပြန်ခဲ့ကြသပေါ့ကွယ်။ တောင်တက်တာက မပင်ပန်းဘူး။ အဲကို ကားနဲ့သွားရတာ အသွားအပြန်စုစုပေါင်း ၃နာရီလောက် ကြာသွားတာက ပိုပင်ပန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ တောင်တက်ခရီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကလည်း မီးရှို့ထားတဲ့အချိန်၊ ပုံကလည်း Nokia N73 နဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေဘဲရှိတော့ ဒီဘလော့ဖတ်ပြီး တောင်တက်ချင်စိတ် ပျောက်သွားဦးမယ်။ တစ်ခြားဘလော့တွေပါ ဖတ်ကြည့်ပါ။ တလောက မလေးရှားရဲ့ ပထမဆုံး အာကာသယာဉ်မှူးတောင် pre-wedding photo ကို အဲတောင်ပေါ်မှာ သွားရိုက်လိုက်တော့ အဲတောင်က နေ့ချင်းညချင်း ပိုနာမည်ကြီးသွားသေးတယ်။
1. Broga Hill @ Constant Aperture
2. Broga Hill sunrise by ah-hong.com
3. Malaysia's first astronaunt pre-wedding photo shoot by Kukubesi
unicode font ရှိသော်လည်း အသင်၏ ဘလော့ကိုကား ဖတ်မရပေ။ CSS တွင် ပြဿနာရှိသည်ဟု ထင်ရပေသည်။
17/2/11 4:25 PM
အိုင္းအီးတြင္ ေလးေထာင့္တုံးမ်ားျမင္ရ၍၊ ေျမေခြးမီးလွ်ံတြင္ကား စာလံုးမ်ား အစီအစဥ္မမွန္ပဲ ျမင္ရေလ၏။ ယူနီကို ေဇာ္ဂ်ီျဖင့္ ျမင္ေနရေလသည္။
17/2/11 4:27 PM
ေက်းဇူး.. ကိုဒီဘီ.. ကိုယ့္ကိုဖတ္ေတာ့လည္း ရေနေတာ့ မသိလိုက္ဘူး.. :D @font-face မွာ local('Myanmar3'), ဆိုတဲ့တစ္လိုင္းေၾကာင့္လားမသိ.. အဲဒါဘဲ ထည့္လိုက္တာ
17/2/11 4:49 PM
Your EOT not work also. font-face using .ttf is surely not work, firefox not support for cross domain for security reason. Unless you host your ttf font and allow cross domain download.
will send you email for the link.
18/2/11 11:04 AM
MrDBA>> owh..is it? maybe that's why the blog readers rate declinealot :D thanks.. pls send me the link :)
18/2/11 11:10 AM
Taunggyi Trip 2010 –7(Home-cooked meals)
Taunggyi Trip 2010 –6(My high school)
Rakhine-style Seafood Curry